Oromoo hundi uummata Walloo Tigiren lola itti banteef dirmadhuf
Oromoon Walloo fi Raayyaa Bara 400 gutuu uummata Habashan itti dule, enyumaa isaa, Afaan isaa, Amanta isaa fi lafa isaa, lammii isaa dhabisisa jiru dha. Uummani Oromoo Walloo fi Raayyaa Mootoon Ethiopia hundi kan isaanti dulee isaan hin fixiin hin jiru Tewodros uummata Walloo fi Raayyaa irratti yakka inni hin rawwatiin hin jiru. Yohanis uummata Walloo fi Raayyaa Amanta keessaan jijjira Oromummaa keessaan Habashati (Amharat) jijjira kana ta’uu banan murte du’aa argatuu jeedhe Oromoo naannoo sana jiru hunda jumulan fixee jira, kan hafe immoo Afaan dhaloota isaa akka lagatu godhe, amanta duri qaban waaqeefanaa fi Isilammuma akka lagatu godhe, Habashumma fudhate Yohans jalati akka buluu godhe, kani immoo baqate gara Afaarti deeme Afaarn ta’ee waliin jirachuu egale. Yakki Habashoota kun bara Minilik ilee yakka wal fakkatatu uummata kana irratti raawwatama ture. Haile Silassen yeroo jalqabaf xiyyaaran lola kan geggese uummata Walloo fi Raayyaa irratti, kana qoofa miti uummani kun bara 1974 ilee yeroo beelan dhumatu diinatu dhuma jira caalisa jeedhani hanga Xilahun Geseseffaa achii deeme siirba boo’icha sirbe uummata kakase baratoon university Haile Silasse irratti akka finciilan kan goodhe fi siirna fiwudala akka hunden buqa’uu kan goodhe keessa sababii gudan tokko yakka uummata kana irra ga’een. Goocha TPLF uummata Raayyaa fi walloo irratti hara’a midha raawwatama jiru ilee Bonbi ykn Fanjii TPLFf awwalame jirudha siirni waayyanne yakkuma isheen hojjeeta jirtu kanatu fanjii isheeti ta’ee ishee guba. በ1983/84 ዓ/ም ለኢትዮጵያውይን የ100 ዓመት የቤት ሥራና ጣጣ ሰጥተናቸዋል በማለት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂ በአደባባይ እንደ ዘበቱ በይፋ ይታወቃል። TPLF kana hojii irra olcha jira.
Mootuummaan TPLF Lola Uummata Hararge irratti bane itti milka’uu dadhabe kara Afaar Oromoo Walloo irratti bane waan jiruf Oromoo hundi deggersa hundan uummata keenya Walloo jiruf atataman qaqabuuf qabna. TPLF waraanaa Agazii gara sanati boobasuu irra iyuu Afaar Militari 35, 000 leenjjisee Oromoo irratti dulchise jira. Habashootaa otoo hin dabalatin uummani Itophiyaa waanjoo (qambaraa) gabrummaa baataani cunqurfamanii dhiitamanii jiraatu. Cunqursaan fi gabrumaan isaa wal haacaalu malee hundumtu jireenyaa gabrummaa jirata. Uummaani akka kanatti jiratu marga fi bishaanif jedhe walwaraanuu hinqabu. Rakkoon daangaa yoo jiraatelee akka aadaa duriiti jaarsummaa dhan hikamu qaba. Wantii beekamu qabu Afaarii fi Somaalee miti Oromoo kan waraanaa jiru, Waraanaa Tigiretu Uffata Somale fi Afaar uffate Oromoo ajjeessa jira. Waayyaanetu gorse kakaasee duuba dhaabatee hidhachiisee waraansiisa. Uummaani Afaarii fi Somaale waan tokko beekuu qabu. Mootummaan isaan duubaa dhaabatee saba ollaa walnyaachiisu gaafaa kufee uummaanii waliti akka hafu beekuu qabu. Wayyaanee jibba uummaatatin gubatee keessii isaa nyaatamee dhumee hiirkisaa mootumootaa allaatiin dhabatee jiraatu gara fulduraa akka kufu beekaanii uummaata ollaa wajjiin waligalanii akka jiraatan itti himuu qabna. Oromoo fi Afaar diinuumaa dhiigaa hin qabani. Waan seenaa keesaa hinjiree uummaanii maadaa dhalootaa akka hindabarsiinee beeksisuun barbaachiisa dha.
Uummani Oromoo fi Uummani Afaar yoomi ilee danga irratti wal lolan hin beekan dhiiga tokko, bara Yohans Oromoo Walloti dulee ajjeese Fixee Oromoo qoofa utuu hin tane saawwi Oromoo ilee gara Afaariti baqatee uummaani Afaar kununse jirachise. Gaafa uummaani Afaar rakkate Oromoo siimate kununsee jirachisee reefa Afaar ilee kabajan Mazgida Oromooti Awwalate akka dhiiga isaati. Oromoo fi afaar diinuma hin qaban TPLFtu diina walti goochuuf yaalaa jira. Lamiin Afaar kana beekuu qabu kan kana godhu TPLF ta'uu beekee dhiiga isaa fi Ante isaa kan ta'ee uummaata Oromoo dhiiga dhangalasu irra of qusachuu qaba. TPLF sabaaf sablammii biyya sanaa walitti naqee umurii turfachuu kan barbaadu wayyaane ta'uu hubachuu qaba.
Uummani Walloo rakko isaa irra ga’uu bakka itti iyatuu hin qabu, abbaa hin qabu, bakka bu’aa hin qabu, mootummaa isaa dhaga’uu fi isaa beekuu hin qabu. Uummani kun feedhi isaa male Mootummaa Naannno Amhara Baherdarti kan ramadame feedhii isaan utuu hin tane murte TPLFtin. Kanaafuu uummaani kun bakka fi nama qunammti tokko waliin hin qabne walliin Nannoo Amharati waan waltti hidhame wagga 25 rakkacha jira. Uummaani kun uummata Oromoo gudiicha waliin walti ijjarame bulchiinsa tokko jalati Oromiyaa jalati buluu qaba. Kun gaafii uummaatichati mootumman Naannnoon Oromiyaa ilee waan kana heera fi seera itti tolche lammii Oromoo kana garggaruu qaba. Saba Oromoo hundi ilee deggeerasa fi dhiiba gochuu qaba.
Loli TPLF maqa saba birran Oromoo irratti geegesa jirtu kun Walloo irratti kan Eegalame utuu hin tane Lixaa fi baha Wallaga, Borana fi Gujii, Hararge fi Balee wagoota darban 25 kana keessa geegefama jirudha. Loli Agaziin Uummata Hararge irratti maqa Somale Ogadenin geegesu kun ciiminan dura dhabatamuu qaba, somalen biyya isaan sanyii isaan balessan nama birraf waan garii hojeetu ykn yaadu jeedhani dhisuun miidha guda fida. Somalen fayyida malee firoma fi amanta hin beekan, badii hanga feedhe yoo rawwatan ilee itti hin gaban kanaafi raggaan jiru waanuma biyya isaa keessati rawwacha jirandha. Kanaafuu dhiimi kun salpha miti. Loli kun cimmee kan itti fufe ammoo erga Ajjaaja Junedin Sadootiin Lammiin Oromoo hundi meesha hidhatee jiru akka hikatuu erga goodhame booda ture, Yonatan Dhibisaa fi Diribaa Harqo bara dame nyageenya Oromiyaa irra jiran sana humna dafee qaqaba Oromiyya ijaruun Oromoo irra facisa turan kanuman cininaman biyya baqaachuuf dirqaman. Dhimmi kun Oromoo baleesuuf dula goodhama jiru waan ta’eef bakka birrootis itti fufu waan danda’uuf Oromoon bakka jiru ka’ee finciiluun diina ofii irra buqisuu qaba kun ta’uu banan badiisa Oromootuu dhufa. Oromoon kammi iyuu dhimma kana akka salphati ilaaluu hin qabu.
Haali Godina Oromiyaa Aanaalee Jile, Fursina Artuma keessatti adeema jiru dula Tigire waraani Agazii uummata Oromoo irratti adeemsisa jiru ta’uu beeke Oromoon waan danda’ee goochuu qaba. Qeerroon Oromoo Walloo jiru balaa isaatti agamamee irra uummata isaa bararuuf durase ka’uu qaba. Lammiin Oromoo biyya ala fi biyya keessa jiru Uummata walloo waga 400 gutuu qabsoo irra jiru kana waan danda’een gargarun amma isaansi:-
1. Oromoon biyya ala jiru Mallaaqaa fi diplomasiin gargaru dha, media Oromoo hundi kana irratti iyee iyya dabarsuu qaba,
2. Oromoon biyya keessa waan danda’een lammii keenya Walloo jiru qaman birrati argamee diina irra facisuu qaba.
3. Mootummaan Naannno Oromiyaa Ummani Oromoo Walloo jiru Mootummaa Naannoo Oromiyaa jalati akka buluu referendami gegesuu qaba.
4. Mootumman naannoo Oromiyaa fi uummani Oromoo gudaan Oromoo walloo Wagga 400 gutuu Afaan isaa fi Aadda isaa jirachiisuuf qabsa’aa jiru kana waliin harriroo cimma tolchachudhan gargarsa maraa goochuuf qaba.
5. Dhaabbileen Siyaasaa Oromoo atataman dhaabbilee Somalee ONLF fi dhaabba mormitoota Afaar qunamudhan uummaan Somalee fi Afaar TPLF birra dhabate Oromoo akka hin lole media isaan hundan ibsuu qabu.
6. Uummaan Afaar TPLF birra gore akka uummaata Oromoo dhiiga isaa hin ajjeefne.
7. Dhaabbileen Afar uummaan Afaar akka TPLF bira hin gore akka gorsan.
8. Uummaani Oromoo lafa Afaar nama Afaar kan hin xuuqiin ta’uu isaa akka beekan.
9. Goochaan kun Kan raawwacha jiru TPLF tigray ta’uu Oromoo fi Afaar hundi akka beekuu nu goodha.
10. Oromoon naanno biraa ilee TPLF lola walfakkata isiin irratti labsuu waan maltuuf waan hundan of qoophesun diina isiinti dhufee of irra dhorkuu qabdu.
Warii hara’a saba Oromoo haalaa rakkoo inni keessa jiru kanati dhiima ba’aatani, Oromoo ajjeesa, lafa isaa fi qabenya isaa sama jirtan kun waan samatan ni deebiftuu yakka Oromoo irratti dalagdanf ammoo dacha dachaan gumma baftuu lubu ittii kafaltuu kana beeka, mootuuman TPLF kun dhiyooti kufa gaafas namni yakka dalage hundatti gaafatamu dhufa, kanafuu Oromoo irratti yakka dalaguu irra of egadha. Gandi Oromoo tokko ilee yoo diini lola itti bane Oromoon waan qabun itti dirmachuu qaba, Wallon ammo mata Oromoo waan ta’eef utuu matan keenya hin rukutamiin ykn hin ciitiin irratti falmachuu qabna, badiisi raayyaa fi Walloti dhufu Badiisa Oromoo hundati fidaa.
http://radionegashi.ethiopianmuslims.net/audio/170418.mp3 Kutaa 1
የኦሮሞና አፋር ግጭት ! የክልሎቹ ችግር ወይንስ የመንግስት ደባ? ሀገራችን ለምን በተለይ በደቡቡ ክፍል የርስ በዕርስ ግጭቱ መልኩን እየቀያየረ የሚከሰተው ለምን ይሆን? መንግስትስ በግጭቶቹ ምን ይጠቀምና ስለምን ይወቀስ ? ከፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ዶክተር ጌታቸው ጂጊና ከሰባዊ መብት ተሟጋቹ ገአስ አህመድ ጋር የተደረገ ዉይይት (ክፍል1)